Maitiro Ekuvandudza Nhare Yekutendeuka Mitengo Iine Dhijitari Wallets | Martech Zone
Nhare dzekushandura nhare dzinomiririra huwandu hwevanhu vakasarudza kushandisa yako nhare mbozha / webhusaiti-yakagadziridzwa webhusaiti, kunze kwehuwandu hwevaya vakapihwa. Iyi nhamba ichakuudza mushandirapamwe wako wakanaka sei uye, nekutarisa kune zvakadzama, chii chinofanira kuvandudzwa.
Vazhinji neimwe nzira kubudirira e-commerce vatengesi vanoona purofiti yavo ichidzika zvakanyanya kana zvasvika kune vanoshandisa nhare. Yekutenga ngoro yekusiya mwero inoseka zvakakwirira kune nharembozha mawebhusaiti, uye ndiko kana uine rombo rakanaka kuti vanhu vatarise kuburikidza nechipo kutanga.
Asi izvi zvinogoneka sei, apo huwandu hwevatengesi vanofamba hunowedzera nemakumi emamirioni gore rega?
Nhare mbozha dzakachinja kure nechinangwa chavo chekutanga. Kana isu tiri kutendeseka, kufona uye zvinyorwa hazvisi izvo zvekutanga mashandiro ema smart mano kune vazhinji vevanhu zvakare. Nharembozha yave kuwedzerwa kwemunhu wemazuvano uye inoshanda zvinangwa zvese zvinonzwisisika, kubva kumunyori nimble kuenda kungoro yekutengesa yepamhepo.
Ichi chikonzero nei kuona nharembozha seimwe svikiro hakukwane zvekare. Iwo maapplication, saiti uye nzira dzekubhadhara dzinofanirwa kugadziriswa uye kudzoreredzwa kune aya madhivha chete. Imwe yedzidziso dzakachinja dzekutengesa nhare ndeye ewallet manejimendi mari, unova iwo musoro wenyaya ino.
Kuvandudza Nhare Dzeshanduko
Chekutanga pane zvese, ngatiitei chimwe chinhu chijeke. Kutengesa kwenhare kuri kutora nzvimbo e-commerce nyika zvakanyanya, nekukurumidza. Mumakore mashanu chete yakaona rize ingangoita 65%, ikozvino yakabata 70% yeiyo yese e-commerce. Kutenga nharembozha kuno kugara uye kunyange kutora musika.
Zvinotoshamisa kuti, kuraswa kwengoro yekutenga kuchiri kwakanyanya kwazvo pawebhusaiti nhare pane izvo zvirimo zvinoonekwa pamakomputa edesktop. Iri idambudziko rakakura kune wese munhu, kunyanya vashoma vatengesi nemakambani avo vatsva mukuchinja. Sei izvi zvichiitika?
Chekutanga pane zvese, pane zviri pachena. Nharembozha mawebhusaiti anowanzoitwa zvisirizvo, uye nechikonzero chakanaka. Kune akawanda madhizaivhi, hukuru, mabhurawuza, uye masisitimu anoshanda ayo anogadzira yakanaka webhusaiti-inoshamwaridzika webhusaiti inoda huwandu hwakakura hwezviwanikwa uye nguva.
Kutsvaga nekufambisa webhusaiti mbozha, nemakumi kana mazana ezvekutenga zvinhu zvinonetesa uye zvinoshungurudza. Kunyangwe kana mutengi akasindimara zvakakwana kuti apfuure nezvese izvo uye oenderera mberi kuenda kunotora, havazi vazhinji vane tsinga dzekupinda mukukanganisa kwenzira yekubhadhara.
Pane imwe mhinduro yakanyanya. Zvinogona kunge zvichidhura pakutanga, asi zvinombozvibhadharira nekukurumidza zvikuru. Maapplication mhinduro iri nani pane nharembozha. Izvo zvakagadzirwa chaizvo kuitira chinangwa chekushandisa nhare uye zvinonyanya kunakidza kutarisa. Uye, sezvatinogona kuona, nharembozha maapplication ane yakanyanya kudzikira yekutengesa ngoro yekusiya chiyero pane ese desktop uye nharembozha mawebhusaiti.
Vatengesi avo vakachinja kubva kumawebhusaiti enhare kuenda kune maapps vakaona kuwedzera kukuru kwemari. Chigadzirwa maonero akakwira ne30%, zvinhu zvakawedzerwa kungoro yekutenga yakakwira ne85% uye kwese kutenga kwakakwira ne25%. Zvichitaurwa zviri nyore, mitengo yekutendeuka iri nani kuburikidza uye kuburikidza neasoftware maapp.
Chii chinoita kuti maapplication akwezve kune vashandisi ndiyo intuitive nzira yekufambisa, nekuti ivo, shure kwezvose, vakagadzirirwa mafoni enhare. Ongororo kubva muna2018 yakaratidza kuti vatengi vazhinji vanokoshesa zvirinani uye nekumhanyisa, pamwe nemukana wekushandisa kamwe chete kutenga nema-e-wallets uye makadhi echikwereti.
Runako rwema digital wallets ari mukureruka kwavo uye-mukati-yakavakirwa chengetedzo. Kana chiitiso chikaitwa uchishandisa dhijitari chikwama, hapana data pamusoro pemutengi rinoratidzwa. Iko kutengeserana kunozivikanwa nenhamba yaro yakasarudzika, saka hapana ari muchiitiko anogona kuwana ruzivo rwemushandi wekadhi rechikwereti. Izvo hazvina kana kuchengetwa pafoni yemushandisi.
Iyo digital chikwama inoshanda senge proxy pakati pemari chaiyo nemusika. Mazhinji emapuratifomu aya anopa nzira yekubhadhara pamhepo inonzi imwechete-bhatani-kutenga, zvichireva kuti hapana chikonzero chekuzadza chero mafomu uye nekupa chero ruzivo - sekureba sekunge iyo app ichibvumidza e-chikwama kubhadhara.
Mamwe emawadhi anozivikanwa kwazvo edhijitari nhasi ndeaya:
PayPal Imwe Kubata
Sezvauri kuona, mamwe acho ari OS-akasarudzika (kunyangwe mazhinji acho achiedza nemakrossovers nekubatana), asi vazhinji vevanozvimirira madhijitari wallets anowanikwa kune ese mapuratifomu uye inoshanduka-chinja. Ivo vanopa rutsigiro rwemakadhi mazhinji echikwereti uye echikwereti, pamwe nekubhadharwa kwevavhoti uye rutsigiro rwe cryptocurrency
Kunyangwe iwe uchizovaka app kubva pakutanga kuti ikwane zvaunoda uye zvekushongedza zvinodiwa, kana kushandisa yakagadzirira e-commerce chikuva, dijitari chikwama kusangana ndiko kunofanirwa. Kana iwe urikushandisa chikuva, mazhinji ebasa rakaoma wakatoitirwa iwe.
Zvichienderana nerudzi rwebhizinesi rako uye nenzvimbo, e-commerce mapuratifomu anokubatsira iwe kusarudza akanakisa e-zvikwama zveboka rako rakanangwa. Chinhu chega chasara kuti iwe uite kuita izvo kubhadhara.
Kana iwe uchida kuvaka kubva pakutanga, zvingave zvakanaka kutanga neakafara seti ye e-chikwama sarudzo uye wobva wateedzera metric. Dzimwe dhijitari wallets dzinogona kunge dziri kudiwa zvakanyanya kupfuura dzimwe, uye izvi zvinowanzoenderana nenzvimbo yako, zvinhu zvauri kutengesa uye zera revatengi vako.
Pane akatiwandei mazano pano.
Varipi vatengi vako? Dunhu rega rega rine zvarinoda, uye iwe unofanirwa kuve unonzwisisa pane izvi. Mutemo wegumbeze wepasi rese yekutengesa ndiPayPal. Asi kana iwe uchiziva kuti chikamu chakakura chekutengesa kwako chinobva kuChina, unofanirwa kusanganisira AliPay uye WeChat. Vatengi veRussia federation vanosarudza Yandex. Europe ine hombe mushandisi base yeSkrill, MasterPass uye Visa Checkout.
Ndeapi michina anonyanya kufarirwa? Tarisa mametric ako. Kana chikamu chikuru chevatengi vako chikashandisa iOS, zvingave zvakanaka kuisa ApplePay. Zvakafanana zvinoenda kune Android Bhadhara uye Samsung Kubhadhara.
Ndeipi nguva yevatengi vako? Kana iwe uri kubata zvakanyanya nevechidiki, kusanganisira madhijitari mawallet akaita seVenmo zvakaoma hongu. Vanhu vazhinji vari muzera renzvimbo 30-50 vanoshanda vari kure kana sevanozvimiririra uye vanovimba nemasevhisi akaita saSkrill naPayoneer. Isu tese tinoziva kuti maMillenials haasi iwo akanyanya kushivirira boka, uye vachasiya zvekutenga kana vasingaone yavo yavanofarira kubhadhara sarudzo.
Ndezvipi zvinhu zvauri kutengesa? Zvinhu zvakasiyana zvinotengesa zvinokanganisa pfungwa dzakasiyana. Kana kubhejera iri turf yako, WebMoney uye mapuratifomu akafanana ayo anopa mavhavha chisarudzo chakanaka sezvo vatove nemukurumbira munharaunda. Kana iwe ukatengesa mitambo uye zvigadzirwa zvemadhijitari, funga nezvekushandisa ma-wallets anotsigira cryptocurrencies.
Kana usina chokwadi chekuenda, taura nevatengi vako. Wese munhu anoda kubvunzwa maonero, uye iwe unogona kutendeukira kune izvi zvinobatsira nekupa pfupi ongororo. Bvunza vatengi vako zvavaizoda kuona muchitoro chako. Maitiro aunokwanisa kuvandudza ruzivo rwavo rwekutenga, uye ndedzipi nzira dzekubhadhara dzavanonzwa kugadzikana nadzo. Izvi zvinokupa iwe nhungamiro yakanaka yekusimudzira mune ramangwana.
E-commerce inowanikwa kune wese munhu. Yakagadzira kutengesa zvinhu kune wese munhu kwese kwese kuve nyore… Uye zvakanyanya kuomarara panguva imwe chete. Iyo sainzi uye zviverengero kuseri kwemusika uyu unogara uchichinja hazvisi nyore kubata.
Iko kufunga kweavhareji mutengi kwachinja zvakanyanya mumakore gumi apfuura uye iwe unofanirwa kuita zvinoenderana. Dzidza uye uchinje, nekuti nhanho inochinja nyika yedhijitari ndeyekufunga.
Tags: amazon kubhadharaAndroid mubhadharodigito chikwamae-zvokutengeseranakunatsiridza shanduko yemitengoMobile Anwendungnharembozha applicationnharembozhakutengeserana kwenharenhare yekushandura nharenharembozha yemusikanharembozha mutengesinhare mbozha vs mobile appnhamba yevatengesi venhare matirivhiza Checkout
Nina muongorori wezvehunyanzvi uye munyori pa DesignRush, musika weB2B unobatanidza mabrandi nema agency. Anoda kugovana zvaakaona uye zvinehunhu zvemukati zvinodzidzisa uye zvinokurudzira vanhu. Chaanonyanya kufarira kugadzirwa kwewebhu uye kushambadzira. Munguva yake yekusununguka, kana asiri kure nekombuta, anofarira kuita yoga uye kuchovha bhasikoro.